विचार – Karnalikhabar
काठमाडौं : ‘म ओली (एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली) जीको कदर गर्छु । उहाँको राजनीतिक चातुर्य र क्षमताको प्रशंसक पनि हुँ’, नायिका करिश्मा मानन्धरले भनिन्, ‘तर, उहाँलाई जनताले ८ कक्षा पढेको नेता भन्दा निको लाग्दैन ।’ नयाँ शक्ति
-सुनिलकुमार लो यो संसार , अचम्म छ,विचित्र छ, गजव छ , म बाल्छु दियो, उ निभाईदिन्छ, म हिड्न खोज्छु, उ तगारो तेर्स्याईदिन्छ, म मुस्काउन खोज्छु, उ पीडा दिन्छ, म खुला हावामा उच्छ्वास लिन खोज्छु , उ जाल बुन्ने फिराकमा हुन्छ , यो संसार,
प्रकाशित मिति : सोमवार, भदौ ५, २०७४
हामी सबै आ-आफ्ना बुवालाई आदर, माया गर्छौं। जसको बुवा हुनुहुन्न, सम्झना हामीसँग छ। हामी बुवालाई सम्झिरहन्छौं। म बुवालाई सम्झिँदा मेरो बाल्यकालको बेलाको बुवा सम्झिन्छु, अनि उहाँ जीवनको अन्तिम क्षणको। उहाँ प्यांक्रियाजको
मेरो घर रुपाकोट मझुवा गढी नगरपालिका ७ चिउरीडाडाँ हो । गाउँघरमा टेलर्स (लुगा सिलाउने) काम गरेर साधरण जिवन यापन गरिरहेको थिएं । यो कामको कमाईले घर ब्यबहार चलाउन धौ धौ पर्न थालेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोच बनाएँ । २०५८ सालमा
हरियो पासपोर्ट– माया के.सी
काठमाडौं, नेपाली साहित्यको विकास र विस्तारको खातिर देश तथा विदेशबाट नेपाली साहित्यका सर्जक स्रष्टाहरू लागि परेका छन् । प्रदेशमा बचेखुचेको समयमा पनि नेपाली साहित्यका विधा मार्फत आफ्ना पिर व्यथा, कथा कहानी र आफुले
विचार नै तपाईको जीवनको नियति
मनुष्य के हो ? यस प्रश्नका अनेक उत्तरहरू आउन सक्छन् । एउटा उत्तर हुनसक्छ - मानिस वास्तवमा विचारहरूको सङ्ग्रह हो । विचार मानसिक प्रक्रिया हो । जसरी माकुराले आफ्नो शरीरभित्रबाट तन्तुहरू निकालेर जालो बुनिरहन्छ र अन्त्यमा आफूले
दीपेश केसी । समाचार विश्लेषण । नेपाल त्यस्तो देश हो जहाँ गणेशमानसिंह जस्ता नेता जन्मिएका थिए जसले किस्तीमा आएको प्रधानमन्त्री पद त्यागेर कृष्णप्रसाद भट्टराईतर्फ देखाएका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइराला पदलाई जहिले पनि फाटेको
एक नेपाली पुरुषले अमेरिकामा श्वेत स्त्रीसँग विवाह गरे । तीनजना छोराछोरी भए । कुनै नेपाली आकारका, नेपाली कदका र नेपाली अनुहारका निस्के । कुनै श्वेत अमेरिकी देखिए । अमेरिकी उचाइ, रंग र चेहरा लिएर जन्मिए । एकजना छोरी अमेरिकीको
कांग्रेस नालायक हो भन्दै पार्टी छाड्ने, एमालेलाई गाली गर्ने ?
प्रकाशित मिति : शनिबार, साउन ७, २०७४
६ मध्ये ५ वटा प्रदेशमा एमाले पहिलो पार्टी भएको छ । २ नम्बर प्रदेशमा असोज २ गते हुने चुनावलाई हामीले अली सिरियसली लिएका छौं । पार्टीले २ नम्बर प्रदेशको वस्तुस्थितिबारे बुझ्न मलाई भनेको छ । म केही दिनमै तराईका जिल्ला जाँदैछु ।
नेपाल आइडल मा ‘टप नाईन ‘ मा पुगेर राष्ट्रिय स्तरमा धनगढीको गौरव बढाउने सन्ध्या जोशीसंगको कुराकानी
सुदुरपश्चिम क्षेत्रबाट राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्याति कमाएका थुप्रै नामहरु छन् । कीर्तिमानी खेलाडी दीपक बिस्ट देखि प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा सम्मका व्यक्तित्वहरु यसै क्षेत्र बाट छन् । यसरी यस